ချစ်သူမရှိသေးတဲ့သူတွေ FAတွေမှသာရရှိနိုင်မယ့် ပျော်ရွှင်မှု (၅)မျိုး - Lifestyle Myanmar
အခုချိန်ထိချစ်သူမရှိသေးလို့ ဘဝကြီးကတစ်ယောက်ထဲ အထီးကျန်နေတယ်လို့ ခံစားနေရတဲ့သူတွေရှိသလို ဘဝအတွက် အချစ်မရှိတာပိုကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာကလည်း အချိန်တန်မှ သူ့အလိုလိုရောက်ရှိလာတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ အချစ်မရှိဘဲ တစ်ယောက်ထဲနေချင်တဲ့သူတွေ၊ ချစ်သူမရှိဘဲ တစ်ယောက်ထဲအထီးကျန်ပြီး အားငယ်နေတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့သူတွေမှာသာရနိုင်မယ့် ပျော်ရွှင်မှု(၅)မျိုးကတော့…
လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်မှာ ချုပ်နှောင်မှုတွေ တုပ်နှောင်မှုတွေ ကင်းနေမှ လွတ်လပ်တာပါ။ တွေ့ချင်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ သွားချင်တဲ့နေရာသွား ဝယ်ချင်တာတွေဝယ်ပြီး လုပ်ချင်တာမှန်သမျှလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့အမြင်ကိုမှလိုက်ပြီး ဂရုစိုက်နေစရာမလိုတော့သလို၊ လိုက်ညှိနေ စရာလည်းမလိုပါဘူး၊ ဒါ့အပြင် လိမ်ညာနေစရာလည်းမလိုတော့ပါဘူး (ဥပမာ ကိုယ်ကအပြင်သွားချင်တာ ပေးမသွားလို့ လိမ်ပြီးခိုးသွားရတာမျိုး)ပါ။ အချစ်မရှိတဲ့သူတွေ FAတွေဆိုရင် ဒါမျိုးတွေ မကြုံတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့။ အမြဲကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကို တစ်ထပ်ထဲ ကျနေတာမို့လို့ ကိုယ့်လောက်လွတ်လပ်တဲ့သူရှိပါတော့မလား။
၂. သူငယ်ချင်းတွေကို ပိုအချိန်ပေးလာမယ်၊ ပိုချစ်လာမယ်
သူငယ်ချင်းဆိုတာ လူတိုင်းမှာရှိသင့်ပါတယ်။ ‘သူငယ်ချင်းမထားဘူးတစ်ယောက်ထဲနေတာပါ’လို့ ဘယ်လောက်ပြောပြော အချိန်တန်ရင်တော့ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် ကိုယ့်အတွက် အနည်းဆုံး ရင်ဖွင့်ရမယ့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တော့ထွက်လာမှာပါ။ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ FA ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း အရင်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေကို အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့သမျှ အခုချိန်မှာတော့ အချိန်များများပေးပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ စကြနောက်ကြ၊ မုန့်တွေသွားစားကြ၊ လည်ကြပတ်ကြ၊ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ကြနဲ့ ပျင်းဖို့အချိန်တောင်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို သိရှိလာပြီး ပိုချစ်လာမယ်၊ ပိုအချိန်ပေးဖြစ်လာမယ်၊ ဘဝမှာသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အရေးပါမှုကိုလည်း ပိုပိုပြီးနားလည်လာမှာပါ။
Beauty girl outdoors enjoying nature. Free happy woman. Toned in warm colors
အပြင်သွားခါနီးတိုင်း သူ့မျက်လုံးထဲမှာ လှနေဖို့ အဝတ်အစားတွေရွေးရ၊ မိတ်ကပ်တွေပြင်ရတဲ့ အခြေအနေကနေ ကျွတ်လွတ်သွားမှာပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဝတ်ချင်တာဝတ်၊ ဘာမှမလိမ်း မပြင်မဆင်ဘဲနဲ့လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လျောက်သွားနေလို့ရပြီပေါ့။ အရာအားလုံးကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ စိတ်ကျဉ်းကျပ်စရာမရှိဘဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေသွားနိုင်ပါပြီ။
သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ၊ ဝါသနာအသစ်တွေ၊ လှုပ်ရှားမှုအသစ်တွေအပြင် အရင်ကမလုပ်ခဲ့ရတဲ့ အရာလေးတွေ အရင်ကမသွားခဲ့ရတဲ့နေရာတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်တော့မှာပါ။ အဲ့အခါကျရင်တော့ ကိုယ့်က ဘယ်အရာကိုဝါသနာပါပြီး ဘယ်အရာကိုပိုအားသာလည်းဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ့် ပိုပြီးတွေ့ရှိလာရမှာပါ။
အပေါ်က အချက်တွေအားလုံးလုပ်နိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ဟာ အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ အများကြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလာမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေနဲ့၊ ကိုယ့်ဝါသနာပါရာ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရတဲ့ လွတ်လပ်ပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတဲ့နော်။
Source – lovelifelearningcenter, wikihow